Ihe omimi na-aga n'ihu na NFC ọhụrụ na ngwaahịa Bluetooth nke ewepụtara na FCC | Esi m mac
Ihe omimi ahụ na-aga n'ihu na ngwaahịa ọhụrụ NFC na Bluetooth nke Apple gosipụtara na FCC
Ọ bụ oge nke atọ kemgbe Septemba gara aga na United States Federal Communications Commission (FCC) Nkeji edemede na-enweta ozi gbasara ngwaahịa na mmepe site na Apple. Na Esi m mac anyị na-ebipụta otu n'ime nkwukọrịta nke Apple mere na Commission.
Ihe anyị ma rue taa bụ na ọ bụ a Kacha ọhụrụ ngwaahịa. Ga-enwe nha yiri Apple TV 4 (Apple TV ugbu a). Ọ ga-ama NFC na Bluetooth, ma obughi Wi-Fi ma rue ugbua anyi mara nomenclatures abuo: A1844 na A1846. Dị nnọọ Apple gaara gwara ndị ọrụ ahụ nlereanya nke dị n'etiti abụọ gara aga omume, A1845.
Versiondị nke atọ a mara awa ole na ole gara aga, metụtara ule nyocha nke RF, yana ndị metụtara obere ike ọkụ nke Bluetooth ma ọ bụ omume nke NFC Chip. Banyere ụbọchị, egosiri ndị ọrụ ahụ akwụkwọ na Jenụwarị 25 ma mara nkọwa ahụ na February 10. Ihe omuma edobere bu ihe nzuzo rue oge nke 180. Ya mere, mgbe oge a kara aka, a ga-eme ka ọha na eze mara njirimara ruo ugbu a, gụnyere foto dị n'ime na mpụga nke ngwaọrụ ahụ. Mgbe ụfọdụ, ọ dịghị oge maka azụmaahịa ya ma yabụ, amaara ngwaahịa ahụ tupu ọ gaa ahịa.
Banyere ozi ọma, ndị a abụghị ọtụtụ, n'ihi na nkọwa nke bipụtara ozi ọ na-adịwanye obere. Nke a a na-eme ụma iji chebe atụmatụ na ọrụ nke ngwaahịa ahụ ka o kwere mee.
Ngwaahịa ahụ ga-adọta 100 mA, na ọnụ ọgụgụ dị elu nke 700 mA, na n'etiti 5,5 V na 13,2 V. Ntụle mbụ emere na Apple TV, mana obere ike oriri dị ka ọ ga-achị. Wiring yiri nke ụdị atọ ahụ Ruo ugbu a.
Ihe niile dị ka ọ na-egosi na ọ bụ ngwaọrụ static maka ụlọ. Oge ngosi ga-abụ otu 2017 a, ebe ọ bụ na ụbọchị ole na ole data nke ngwaọrụ ahụ, ruo ugbu a zoro ezo, ga-eme ka ọha na eze mara, nke ga-amanye igosipụta ngwaahịa a na ọha mmadụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » ọtụtụ » Ihe omimi ahụ na-aga n'ihu na ngwaahịa ọhụrụ NFC na Bluetooth nke Apple gosipụtara na FCC
Apple Music karịrị ndị debanyere aha nde 20, mana ụlọ ọrụ anaghị enwe obi ụtọ